Ny Tahan'ny fisaraham-panambadiana amin'ny Firenena: izao Tontolo izao ny folo Indrindra sy ny kely Indrindra dia Nisara-panambadiana ny Firenena - Miray Mpisolovava - Mpisolovava avy amin'ny firenena Arabo. Arabo mpisolovava an-tserasera.
Ny Tahan'ny fisaraham-panambadiana amin'ny Firenena: izao Tontolo izao ny folo Indrindra sy ny kely Indrindra dia Nisara-panambadiana ny Firenena - Miray Mpisolovava
Eto, ny sokajin-taona ny panambadiana tandavan avy - taona
Dia efa naka ny fandinihana akaiky kokoa ny fisaraham-panambadiana ny fironana manerana ny tanyAmin'ny fanambadiana no lasa tsy dia malaza sy fisaraham-panambadiana mitohy miakatra hatrany. Jereo eto ambany ny infographic: Isan-taona, izao tontolo izao ny fikambanana toy ny firenena MIKAMBANA an-tsoratra ny global ny tahan'ny fisaraham-panambadiana. Araka ny voarakitra angon-drakitra, ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana ny antontanisa dia be ny fanovana noho ny isan'ny mampihetsi-po ny anton-javatra. Antony mahazatra indrindra dia ahitana: Ny antony dia tena be dia be izahay, ary mbola tsy dia voalaza hafa irreconcilable lafin-javatra izay mahatonga ny mpivady hiantso izany quits ary farany ny fanambadiana. Na dia ny fanambadiana ny tahan'ny tsy mbola marin-toerana, ary dia nandatsaka. Ity, na izany aza, tsy ahitana olo-malaza ny fanambadiana fa tapitra amin'ny alalan'ny ara-dalàna ny fisarahana.
Manana mponina eo ho eo amin'ny, Luxembourg, raha ny marina ny iray amin'ny kely indrindra amin'ireo firenena ao Eoropa.
Dia mirehareha mandroso ny toe-karena sy ny fahefa-mividy avo parity. Izany ihany koa ny iray amin'ireo firenena ao Eoropa amin'ny avo indrindra ny tahan'ny fitomboan'ny mponina. Ary izao dia izao, izany ihany koa ny tampon'ny firenena amin'ny avo indrindra ny tahan'ny fisaraham-panambadiana any amin'izao tontolo izao. Luxembourg ihany no mamela ny fisaraham-panambadiana mba handray ny toerana nomena fa roa tonta dia ambony amby roa-polo taona no nivady fa farafahakeliny ny roa taona.
Ary toy ny firenena hafa eto amin'izao tontolo izao, ny tahan'ny nampiseho ao amin'ny antontan'isa mikasika ny fanambadiana no mihena tsikelikely.
Rehefa mieritreritra ny any Espaina, ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina dia ny fivavahana Katolika.
Izany no tena antony mahatonga izany ny mahagaga fa ny laharana faharoa ao amin'ny lisitra ny firenena amin'ny avo indrindra izao tontolo izao ny fisaraham-panambadiana ny tahan'ny. Espaina ihany ny somary ambany noho ny Repoblika Czech, izay tahan'ny fisaraham-panambadiana famantaranandro amin'ny. Any amin'ny toerana izay Katolika tanteraka ny manameloka ny fisaraham-panambadiana, ny tahan'ny ny fanambadiana nifarana tamin'ny fisaraham-panambadiana rose dimy amby enim-polo koa satria efa ara-dalàna tamin'ny taona sy ny antony dia tsotra tamin'ny taona. Hafa singa manampy trotraka ny fanambadiana ny tahan'ny rano mitete sy ny fiakaran'ny tahan'ny fisaraham-panambadiana any Espaina dia ny olana ara-bola ny firenena niaina tao anatin'ny taona vitsivitsy.
Ny fahatelo mpihazakazaka-ny momba ny lisitry ny tontolo izao ny tahan'ny fisaraham-panambadiana dia Frantsa.
Na dia matetika travel-tanjona toerana ho an'ny mpivady, dia hita fa tsy izy rehetra misy ny faly. Raha ny zava-misy, Paris, ny firenena ny olon-tiany renivohitra, manana ny isa ambony indrindra ny fisaraham-panambadiana nametraka fitarainana tany rehetra Frantsa, manana ny bontolony, ny tahan'ny fisaraham-panambadiana.
Ny ara-dalàna taona ho an'ny fanambadiana any Frantsa no nametraka amin'ny tanora taona.
sivy isaky ny arivo mponina ao mponina
Ho an'ny tovovavy taona eo - ary te-hanambady, dia mila fanekena avy amin'ny farafahakeliny ny iray amin'ny ray aman-dreny. Manova izany fanomezana amin'izao fotoana izao ao fandrosoana. Voalaza fa ao amin'ny fiaraha-monina maoderina, ny Rosia, ny fanambadiana tsy mahavita bebe kokoa noho ny isan-tsegondra. Fa nahoana rosiana mpivady nandresy ankoatra. Ny sasany milaza ny fanitsakitsaham-bady, ny fahantrana, ny fisotroan-toaka, ary ny fidorohana zava-mahadomelina dia tokony ho tsiny amin'ny avo dia avo ny tahan'ny fisaraham-panambadiana. Kely isan-jato amin'ireo masoivohonay no nilaza fa mpivady ny fisaraham-panambadiana noho ny tsy fisian'ny marimaritra iraisana, ny fitiavan-tena, tsy fifankahazoan-kevitra, fifandirana, ary ny fiantraikan'ny haino aman-jery sosialy. Mandra-pahoviana no fanambadiana farany any Rosia.
Ny fikarohana dia milaza fa ny ampahatelon'ny ny fanambadiana tsy hahomby amin'ny voalohany ny dimy taona.
Ao anatin'ny dimy taona manaraka, ny ampahefatry ny fanambadiana tonga any amin'ny famaranana.
Ny tahan'ny fisaraham-panambadiana mianjera tsikelikely ho antsasany eo ho avy ny dimy taona, ary koa mihena toy ny mpivady miara-mijanona intsony. Ny antony noho ny fisaraham-panambadiana any Etazonia dia sokajiana ho roa:-tsiny sy tsy misy tsiny. Amin'ny tompon'andraikitra amin'ny fisaraham-panambadiana ampiasaina mba ho ny hany fomba mba hametraka ny fanambadiana any amin'ny farany ary raha ny roa nisy fahasamihafana, misakana roa lahy avy manambady ny olona iray ara-dalàna. Na izany aza, tsiny fisaraham-panambadiana dia afaka ny ho ialana amin'ny sasany fiarovana.
Tsy tompon'andraikitra amin'ny fisaraham-panambadiana, eo amin'ny lafiny iray hafa, dia mitaky ny tsy filazana na ny fametrahana ny tsiny na ny antoko.
Antony mahazatra fa lavo eo ambanin'ny tsy tompon'andraikitra amin'ny sokajy ahitana irreconcilable fahasamihafana, tsy mifanaraka, ary tsy azo ihodivirana ny faharatsiana ny fanambadiana.
Fikarohana izany fa ny olona izay mahazo avo ny fidiram-bola tsy azo inoana loatra hiafara amin'ny fanovana ny sata ara-panambadiana 'nisara-bady'. Indrisy anefa fa, ny vehivavy amin'ny ambony fidiram-bola loatra vintana hahazo manambady. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ireo mpivady ireo fidiram-bola ambany dia manana fahafahana ambony kokoa mba hahazoana fisaraham-panambadiana noho ny ara-bola ny sorisory. Nandritra ny taona maro, ny antony mahatonga ny fisaraham-panambadiana any Alemaina niova ny alalan ny fotoana. Taloha ny olana toy ny fisotroan-toaka, ny fanitsakitsaham-bady, sy ny herisetra dia lasan'ny tsy mifanaraka sy ny fifandraisana olana. Satria tsy faly fiafarana tsy azo ialana, sy ny alemana Lalàna Rafitra manakana bebe kokoa ny fisehoan-javatra ny fisaraham-panambadiana, rehefa iray ihany ny tany noho ny fisaraham-panambadiana. Izany hoe, raha toa ny mpivady dia tsy afaka ny hamaha ny olana, vokatry ny rava ny fanambadiana.
Samy mpivady dia takiana ny Fitsarana, mba hiseho eo anoloan'ny Mpitsara sy ny fanjakana ity manokana.
Eto, enumerating ny antony mahatonga ny fanambadiana ny faharatsiana dia tsy ilaina. Ny fisaraham-panambadiana dia azo ekena raha toa ka ireo mpivady dia nandeha ny alalan ny taona iray ny fisarahana, mihevitra fa izany no consensual. Na izany aza, raha misy ny vady tsy miombon-kevitra amin'izany, ny lalàna dia mitaky ny telo taona ny fisarahana. Mba hahazoana fisaraham-panambadiana, any ANGLETERA, tokony ho manambady, fara fahakeliny isan-taona, ary manaporofo ny fitsarana fa ny fanambadiana dia rava noho ny iray amin'ireo antony manaraka ireto: Tamin'ny, nisy, nisara-panambadiana ny mpivady any Nouvelle-Zélande. Tahaka ny any Alemaina, NZ manaiky afa-tsy tany iray ho fanafoanana ny fanambadiana - misaraka na irremediable farany ny fanambadiana. Ny fisaraham-panambadiana dia mety ho nametraka fitarainana eo anatrehan'ny Fianakaviany ny Fitsarana raha toa ka ny roa efa nisaraka ho roa taona. Samy mpivady dia afaka mametraka ny fampiharana na ny hampihatra irery ihany raha ny zava-misy miantso azy. Ny fanambadiana ny tahan'ny in NZ efa mihena hatrany hatramin'ny. Be dia be ny lafin-javatra mandray anjara lehibe izany ny fahalavoana amin'ny olon-droa nanao hoe,"ataoko", ao anatin'izany ny: Ny Fanambadiana sy ny fisaraham-Panambadiana Antontan'isa Fizarana tahirin-kevitra mampiseho fa manodidina ny telo amby telo-polo rehetra Aostraliana ny fanambadiana ireo mialoha mba hiafara amin'ny fisaraham-panambadiana. Izany tahan'ny ny efa mitombo tsikelikely hatramin'ny, indrindra fa raha ny Fianakaviana Lalàna Hiasa ara-dalàna 'no-tsiny ny fisaraham-panambadiana', milaza fa ny antony mahatonga ny tahan'ny ny fanambadiana misaraka fa tsy misy dikany iray ny fahafahana mahazo ny fisaraham-panambadiana. Tamin'ny taona, roan-jato ny fisaraham-panambadiana dia omena any Aostralia, izay midika fa, efa-jato ny olona bebe kokoa ireo vaovao-panambadiana tamin'izany fotoana izany. Mifototra amin'ny vao haingana Aostraliana fianarana, ireo olana dia mandray anjara amin'ny fampitomboana ny tahan'ny fisaraham-panambadiana any Aostralia: ny fitsapan-kevitra Iray nokarakarain'ny Bank of Montreal manambara fa ny mpivady nisara-panambadiana noho ny olana ara-bola. Ireo olana hitondra momba ny fandresen-dahatra tsy tapaka, ary avy eo ny fanapahan-kevitra antontan-taratasy ho fisaraham-panambadiana ara-dalàna manaraka. Ny antony hafa vokatry ny fitsapan-kevitra ahitana ny fanitsakitsaham-bady, lavo noho ny fitiavana, ny tsy fahampian'ny mifanentana, sy ny herisetra an-tokantrano. Ankehitriny, fa efa feno folo dia tena nisara-panambadiana ny firenena, aoka ny lohany ny kely indrindra nisara-toerana eto amin'izao tontolo izao. Mifanohitra amin'ny fiheveran-diso, ny fisaraham-panambadiana toe-javatra ao India hitranga amin'ny"fitiavana ny fanambadiana"raha ampitahaina amin'ny"nandamina ny fanambadiana"amin'ny ankamaroan'ny fotoana. Na izany aza, India manana ny ambany indrindra ny tahan'ny fisaraham-panambadiana any amin'ny tontolo ho daty. Isaky ny, ny fanambadiana, afa-tsy telo ambin'ny folo mifarana amin'ny fisaraham-panambadiana. Ny indiana miaina araka ny fitsipiky ny Haindò, izay milaza fa"ny lehilahy iray, vehivavy iray"politika. Indiana fampakaram-bady, na inona na amin'ny fivavahana, hitondra ny volana mialoha-panambadiana ny fombafomba sy be kokoa ny andro mialoha ny tena fampakaram-bady. Ny manontolo"ny fanambadiana dingana", miaraka amin'ny ray aman-dreny roa tonta anjara, nanorina ny fifamatorana ara-tsaina eo amin'ny mpivady.
Ho an'ny vehivavy Indiana, ny fisaraham-panambadiana dia mety tsy ho safidy tsara indrindra satria izy ireo dia ho heverina ho toy ny fanoherana ny fitsipika sy ny fomban-drazana ny fiaraha-monina Indiana.
Ankoatra izany, ny vehivavy no mba soroka ny vidiny avo ny fisaraham-panambadiana. Ankoatra ny vanim-potoana talohan'ny fampiharana sy ny fitadiavana marimaritra fe-potoana, ny fisaraham-panambadiana ny fakàna am-bavany matetika maka - volana. Na dia fiaraha-manaiky fisaraham-panambadiana handray - volana mialoha ny fisaraham-panambadiana dia afaka ny handray ny vokany. Ho nanohitra ny toe-javatra, ny fitsarana dia afaka ny ho azo mihitsy amin'ny filazana ny dot ny fampijaliana, ny fampijaliana, ny halatra, sns. ary izany mety hisintona teo nandritra ny taona maro. Ny fisaraham-panambadiana dia ny foto-kevitra fa ny ara-dalàna tsy nankasitraka noho ny Shiliana. Izany angamba no tsara-nitombo ny fisaraham-panambadiana ihany no nanao ny ara-dalàna tamin'ny taona. Na izany aza, ny Lalàna Shiliana Rafitra manambara fa tsy misy zavatra toy izany ho toy ny tsy misy tsiny ny fisaraham-panambadiana.
Izany dia midika fa ny roa tonta dia tokony manaporofo ny antony nametrahana ny fisaraham-panambadiana.
Azo ekena noho ny antony ahitana mitaiza ny fanitsakitsaham-bady, ny fahafoizana, sy ny herisetra ara-batana. Nahoana Kolombiana mpivady fitantanana ny hijanona miaraka intsony miteraka adihevitra eo amin'ny hafa firenena. Ny sasany milaza fa ny vehivavy Kolombiana dia tonga lafatra ny mpiara-miasa satria izy ireo dia mihazona ny faha-tena tsara ianao, dia fianakaviana-mirona kokoa sy vonona ny hanao toy ny mpiara-miasa. Na inona na inona tranga misy, dia hita fa mpivady ao amin'ity firenena ity hanao ny asany tsara ny ao mitoetra manambady sy ny fitandremana ny voady. Any amin'ny toerana izay ny fisaraham-panambadiana dia omena haingana be noho ny Etazonia, fa tsara tarehy mahagaga fa taha latsaka ambany ity. Tombatombana milaza fa Meksikana mpivady miezaka ny fisaraham-panambadiana tsy noho ny tafahoatra ny fanajana ny fiangonana Katolika. Koa, tamin'ny taona, ny Meksikana, lalàna Federaly ampiharina ny fitsarana intsony ny fanekena ny fisarahana am-panambadiana fangatahana avy amin'ireo tsy monina. Fantatra amin'ny maha-iray amin'ireo firenena amin'ny avo indrindra mponina Silamo ao amin'izao tontolo izao, Torkia toa ny manana ny ambany ny tahan'ny fisaraham-panambadiana ihany koa. Ny isan'ny mpivady ao Tiorkia dia refesina amin'ny bontolony fanambadiana rate, izay fotsiny ny fitambaran'ny ny fanambadiana ao anatin'ny nomena faritra ara-jeografika.
Ao ny raharaha ny vahoaka tiorka, afa-tsy.
efa-polo amby enin ho an'ny rehetra, ny fanambadiana mirona mba hampiasa ny fisaraham-panambadiana. Izany dia tena ambany raha ampitahaina amin'ny iraisam-pirenena taha, indrindra fa ireo ao Eoropa. Nahoana no izany ny raharaha Milaza ny olona hoe mpivady miaraka amin'ny ankizy misafidy ny hanao ny fanambadiana asa avy fa tsy mahazo misaraka. Famatorana ny tahan'ny fisaraham-panambadiana any Torkia dia Iran. Vao haingana, ny governemanta Iraniana farany ny lalàna ny tanjona mba hahazoana fisaraham-panambadiana, ny mafy kokoa ny ezaka sy ny hampitsahatra ny fitomboan'ny ravana ny fanambadiana. Na dia fiaraha-manaiky ny fisaraham-panambadiana dia tsy azo omena raha toa ny mpivady dia tsy nandalo torohevitra. Araka izany, ny rehetra ny mpivady izay mitady mba hamaranana ny fanambadiana dia ilaina ny sonia ho an'ny torohevitra sy vahaolana ny olana. Antony mahazatra ho fisaraham-panambadiana ao Iran dia ny fidorohana zava-mahadomelina, ny fianakaviana fitsabahan'ny, tsy fitiavana, sy ny herisetra an-tokantrano. Tsy misy fanontaniana fa ny fisaraham-panambadiana, amin'ny endriny rehetra, mijanona ho mafy loha olana fa ny fiaraha-monina maoderina endriny amin'izao fotoana izao. Na dia mety ho fotsiny fifanandrifian-javatra fotsiny, dia hita fa ny fisaraham-panambadiana ny tahan'ny ambony eo koa ny firenena mandroso, ampitahaina amin ireo izay tsy.
Ny zavatra tsara indrindra amin'ny governemanta ny rafitra dia ry zareo miasa amin'ny fanatsarana ny taha ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana noho izany ny mpivady dia mihevitra ny fisaraham-panambadiana ho toy ny farany farany ny fialan-tsasatra.
Arabo mpahay lalàna ao amin'ny United States
அங்கீகாரம் சட்டம் மூலம்